March 2009 edited December 2009 in Internet & Email
အပေါ်က ဆိုက်တွွေနဲ့လည်း စမ်းကြည့်ပါဦး..
Gtalk အတွက်ကတော့ ဟုတ်ပါပြီ..
Gmail Lite လေးလုပ်ပါဦး..။ Bagan က မဘန်းထားတဲ့ glite ပေါ့ဗျာ..။
Don't use Gmail lite. It will keep your password. Use proxy site from foreign country.
Gtalk Chat ချက်လို့ရတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခု ကျန်နေသေးလို့ ထပ်ပြီးအားဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
invisiable ပါလုပ်လို့ရပါတယ် imo.im ပါ သူ့ဆိုဒ်ကိုမသွားချင်ဘူးဆိုလဲ သူ့ရဲ့ ဆော့၀ဲလေးကိုပါ
သုံးလို့ရပါသေးတယ် စိတ်၀င်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ယူသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်:103:
Glite သုံးရင်ကြောက်ရမှန်း ခုမှပဲသိတော့တယ်ဗျာ........ကျေးဇူးပဲ ကို Obama
ကို kaungkimpyar123 မဖြစ်မနေသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ http://aidebate.com/tada မှာ ၀င်သုံးကြည့်ဗျာ ဒါလေးတော့ကျန်သေးတယ် မဘန်းသေးဘူး
ကျွန်တော်က အခု window7ကို ပြောင်းတင်လိုက်ပါတယ်။
window7update ရတယ်။
microsoft security essential update ရတယ်။
တခြား site တွေလည်း ဖွင့်လို့ရတယ်။
vista တုန်းက သုံးနေတဲ့။ gtalk ကို install လုပ်တော့ singing in နဲ့ connecting ပဲ ပြောင်းနေတယ်။
window firewall ကိုလည်း ပိတ်ထားတယ်ဗျ။
window7Ultimate copyright 2009 Microsoft corporation. All rights reserved. တဲ့။
antivirus က တော့ microsoft security essential သုံးတယ်။
gtalk setting မှာ use the following proxy ဆိုပြီး ။ proxy ဖြည့်သုံးတယ်။
google မှာ gtalk.exe ကို သွားဆွဲပြီး run တော့လည်း မရဘူး။
ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကူပါနော်။
gtalk မှာ တလုံတလုံဆိုတဲ့အသံမထွက်ချင်လို့ပါ:D:D
setting/ notifications/ incoming chat က play sound ကို အမှန်ခြစ်လေး ဖြုတ်ထားလိုက်ရင် ရပါတယ်အကို။
Windows7မှာ gtalk နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ် ။
Anti virus အမျိုးမျိုးနဲ့ဒုက္ခပေးပြီး gtalk အလုပ်မလုပ်နိုင်တာလဲပါသေးတယ် ။
အခုအောက်မှာ ဖော်ပြပေးမဲ့Xp SP3 Compatible Move ကို စမ်းပြီးလုပ်ကြည် ့စေချင်ပါတယ် ။
# Fixed it by going to the executable, right click & select properties, and within the "Compatibility" tab checking XP SP3 mode. After that it connected immediately.
ဒါမှမရရင်တော့ဒီ Page မှာ၀င်ပြီးကြည် ့ပါ ။ Windows7ရဲ့gtalk ပြဿနာ အမျိုးမျိုုးကို မေးမြန်း ဖြေရှင်းထားတဲ့Site များပါ ။ တခုမဟုတ် တခု အဆင်ပြေသွားမှာပါ ။
ဒါမှမရရင်တော့ဒီ Page မှာ၀င်ပြီးကြည် ့ပါ ။ Windows7ရဲ့gtalk ပြဿနာ အမျိုးမျိုုးကို မေးမြန်း ဖြေရှင်းထားတဲ့Site များပါ ။ တခုမဟုတ် တခု အဆင်ပြေသွားမှာပါ ။[/QUOTE]
ကျေးဇူးပါ။ မရသေးဘူဗျ။ လိုက်တော့ ဖတ်နေပါ၏ ။ compatibility mode ပြောင်းလိုက်တယ်။ မရဘူးဗျ။ administrator ကနေ run တယ် မရဘူးဗျ။
7 & talk တွေကို လိုက်ဖတ်နေတယ်။ သေချာတယ် မသုံးတော့ရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်။